RASMI: Everton oo la wareegtay ciyaaryahankii khadka dhexe ee kooxda Manchester City… – Gool FM
RASMI: Everton oo la wareegtay ciyaaryahankii khadka dhexe ee kooxda Manchester City…
Haaruun July 15, 2019
(Liverpool) 15 Luulyo 2019. Kooxda kubadda cagta Everton ayaa ku dhawaaqay inay dhammaystiray saxiixa laacibkii khadka dhexe ee Manchester City, Fabian Delph.
Fabian Delph ayaa maanta Everton kula biiray xerada ay tababarka ku sameynayeen ee dalka Switzerland si uu u dhammaystiro ku biiristiisa kooxda ka dhisan Magaalada Liverpool.
Waxa ay kula soo wareegeen heshiis aan qiimihiisa la shaacin balse lagu qiyaasayo inuu yahay 9 milyan oo gini, waxaana laacibkan khadka dhexe uu qalinka ugu duugay Toffees heshiis saddex sanadood ah.
Ciyaaryahan Fabian Delph ayaa soo gabagabeeyey muddo afar sanadood ah oo uu joogay garoonka kooxda Manchester City ee Etihad.
Delph ayaa qeyb ka ahayn xiddigii Man City ee u duulay dalka Shiinaha, halkaasoo ay ka bilaabi doonaan u diyaar garowga xilli ciyaareed cusub 2019-20.
Xiddiga xulka qaranka England ayaa 20 kulan u saftay kooxda Man City xilli ciyaareedkii la soo dhaafay, waxaana uu ku guuldarreystay inuu booskiisa safka hore adkeysto kaddib markii uu dhaawac ka soo kabsaday daafaca garabka bidix ee Benjamin Mendy.
Kooxda Everton ayaa horay ula saxiixatay goolhaye Jonas Lossl oo ay beeca xorta ah uga soo qaateen Huddersfield, halka heshiiskii amaahda ahaa ee laacibka khadka dhex ee Andre Gomes ay xagaagan ka dhigeen mid joogto ah.
Wakiilka Philippe Coutinho oo ka hadlay suurtogalnimada uu ugu biiri karo Manchester United